Rumaynta maalinta aakhiro
Friday, 25 March 2016 07:34
* Waxaan rumaynayaa maalinta aakhiro, waa maalinta ay adduunyadu dhamaanayso (daarta shaqada) oo aakhiro ay soo galayso (daarta abaalka) dadka baarriga ah janno ayaa loogu abaalgudayaa, dadka faajiriinta ahna naar ayaa lagu abaalmarinayaa.
* Maalinta qiyaame miisaanka ayaa la soo dhigayaa, addoon kastana kitaabkiisa ayaa la siinayaa, qofka kitaabkiisa midigta laga siiyo nabiga -naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee- ayuu jannada la galayaa, qofkii kitaabkiisa bidixda laga siiyana Fircoon -lacnad haku dhacdee- ayuu naarta la galayaa.
* Waxaa la taagayaa siraadka, qofkii ka gudbo jannada ayuu aadayaa, qofkii biraha qaroofan ay dafaanna camalkiisa hallaysan dartii naarta ayuu ku dhacayaa.
* Maalinta qiyaame waxay leedahay astaamo iyo calaamooyin yaryar iyo kuwo waaweyn.
* Calaamadaha yaryar waxaa ka mid ah: amaanada oo lunta, dilka oo bata, inay xukunka xoog ku qabsadaan dadka faasiqiinta ah, inay ka hadlaan dadka liita arrimaha muhimka ah.
* Calaamadaha waaweyn waxaa ka mid ah: mahdi inuu soo baxo, inay istaagto khilaafada toosan oo ku taagan waddada nabinimada saacadda qiyaame ka hor, iyo soo bixidda Masiix Dajaal.
* Soo degidda nabi Ciise -nabadgelyo korkiisa ha ahaatee- si uu u hoggaamiyo muslimiinta gaaladana ula dagaallamo, wuxuuna jabinayaa saliibka wuxuuna dilayaa doofaarka, mana ogolaanayo waxaan islaamka ahayn.
* Ma harayo guri dhoobo ama dhogor ka samaysan oo diintan Alle uuna ku gelin doonin cisada midka cisada leh ama dulliga kan dullaysan.
* Soo bixidda Yaajuuj iyo Maajuuj, sidoo kale soo bixidda daabadda dadka la hadlayso, iyo ka soo bixidda qorraxda meesha ay u dhecayso, iyo qaadidda Quraanka iwm.
* Qofka sameeya wax yar oo khayr ah ama shar ah wuxuu ku arkayaa maalinta Qiyaame kitaabkiisa.
* U degdega dhaacooyinka qoriddooda intayna ku dhamaanin waqtiga dhimashada addoonka xilli Ilaahay mooyee qof kale ogayn.
* Ehelkiisa ayaa qofka dhaqaya way kafanayaan wayna ku tukanayaan wayna aasayaan, waxaa u imaanaya labo malag Munkar iyo Nakiir, way soo fariisinayaan waxay weyddiinayaan: waa kuma rabiigaaga? waa maxay diintaada? waa kuma nabigaaga?.
* Haddii uu uga jawaabo Alle waa rabbigayga, islaamkana waa diintayda, Muxamedna -naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee- waa nabigayga iyo rasuulkayga -oo Alle sidaas waafajiyo- qabrigiisa waxaa looga furayaa dariishad jannada meesha uu ka degi lahaa uu kaga arkayo, iyo guryihiisa iyo mulkigiisa, wuu farxayaa qabrigiisana waxaa loo waasiciyaa inta uu araggiisa gaarayo.
* Haddii uu ka mid yahay gaalada waxba kama jawaabi karo, jawaabta waqtigaas kuma xirna caqli iyo maskax.
* Laakin Alle wuxuu sugayaa waqtigaas dadka iimaanka leh wixii ay hormarsadeen dartii oo wanaag ah sida tawxiidka, gudashada waajibaadka, jihaadka, samafalka, faridda wanaagga reebidda xumaanta, sadaqada, akhriska Quraanka, soonka waqtiyada kulul, oogidda saaladaha habeenaha dhaadheer ee qabowga ban.
* Haddii gaalada uu ka mid yahay qabrigiisa ciriiri ayuu ku noqonayaa ilaa ay feerahiisa is dhex galaan, qabrigiisana uu noqdo god godadka naarta ka mid ah camalkiisa xun datrii.
* Walaalkayga muslinka ahow dadaal, maanta waa shaqo xisaab ma jirto, berrina waa xisaab shaqo ma jirto.
* Maalintaas muslimiinta dhaacada la yimid keliya ayaa jannada galaya, maxaayeelay Alle maalinta qiyaame ma aqbalo islaamka waxan ahayn.
* Jannada waxaa yaalla raaxo dheg ayna maqlin, ilna ayna arkin, qofna qalbigiisa ku soo dhicin, raaxadeeda waa jiri doontaa mana go'ayso, dadkeedana ma dhintaan, naciimka jannada waxaa ugu weyn aragtida wejiga rabbiga koonka.
* Dadka caasiyaasha iyo faajiriinta iyo gaalada naarta ayay galayaan, naarta waxaa ka jira cadaab aan loo adkaysan karin oo Alle gaalada u diyaariyay, buuro sugan uma adkaysan karaan cadaabkaas, gaalada meesha ayaa lagu cadaabayaa si joogsi lahayn.
* Dadka raacay madaxda waxay dalbanayaan in loo laablaabo cadaabka kuwa madaxda ahaa oo iyaga lumiyay, Alle wuxuu amrayaa in dhamaan loo laablaabo cadaabka.
* Xaqqan ku sugnow -walaalkayga muslinka ahow- yayna ku sirin dadka ka soo horjeeda badnaantooda, haddii aad warkooda yeesho dadka dhulka jooga badankooda waddada Alle ayay kaa luminayaan, raac dadka Alle waddadiisa qaadaya.
* Kama suulayso koox ummadda nabi Muxamed ka mid ah inay xaqqa ku sugnaadaan iyaga oo muuqda, mana dhibayo qofka iyaga khilaafo ama hoojiyo ilaa saacadda qiyaame.
* Maxay tahay xeeladda lagu gaari karo darajooyinkaas loogana badbaadi karo hoosudhacyadaas, maxay tahay xeeladda lagu haleeli karo dadka hormay oo Alle u dhow, iyo sida looga fogaado kuwa jeedsaday oo halaagsamay, waa towbad saafi ah, hagaajisa wixii tagay, iyo camal wanaagsan hagaajiya wixii ka haray cimriga, go'aan adag inaad ku qaadato inaad toosayso oo aadan leexanaynin.
* Dadka bidhaantaada kula joog, wax iibi waxna iibso, guurso, dhulkana ku camir wixii Alle kuu xalaaleeyay.
* Yuuna ku mashquulin qalbigaaga adduuyo, qalbigaaga la tag meesha ay habboon tahay inaad joogto, halkaas waa Allaha raxmaanka carshigiisa hoostiisa, ku sujuud qalbigaaga sujuud aadan ka soo istaagaynin ilaa maalinta Qiyaame laga gaarayo.
More in this category: « Rumaynta rususha Rumaynta qadaha iyo qadarka »
SEEING IS BELIEVING: A PHYSICAL APPEARANCE OF A TRUE HAUSA MAN
Globalisation and Languages in Africa